Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / In laga shaqeeyo Iswiidhan / Bilow shirkad gaar kuu ah
Ku soco adiga la siiyey sharciga degganaanshaha kumeelgaarka ah
Adigu waxaad codsan kartaa sharciga deganaansho ee joogtada ah haddii aad shirkadaada ka macaashto lacag kugu filan marka sharcigaaga deganaansho ee ku meel gaarka ahi dhamaanayo.
Si aad u hesho sharciga deganaansho ee joogtada ah waa inaad:
leedahay waayo aragnimo weyn dhinaca laantan ganacsiga.
leedahay waayo aragnimo hore in la socodsiiyo shirkad gaar kuu ah.
leedahay aqoon khuseysa iswiidhishka iyo/ama ingiriisida.
caddaysaa inaad adigu tahay qofka socodsiinaya shirkadan.
leedahay mas'uuliyada go'aaminta shirkadan.
mulkiile ka tahay ugu yaraan kala bar oo bar shirkadan.
macaashtaa lacag kugu filan si aad isu masruufi karto.
Haysato lacag kugu filan si loo socodsiiyo shirkad iyo macaashtaa lacag ah laba sanno oo mustaqbalka ah.
Dheeraad ku saabsan in la bilaabo shirkad gaar ah marka aad haysato sharciga ku meel gaarka ah ka akhriso Hey'adda Socdaalka bogeeda. Warbixintan waxaa lagu helayaa oo keliya iswiidhish iyo ingiriisi.